Daweyn lacag-la’aan ah oo loo sameynayo qoysas deggan xeryo barakac oo ku yaalla Beledweyne - Radio Ergo
Daweyn lacag-la’aan ah oo loo sameynayo qoysas deggan xeryo barakac oo ku yaalla Beledweyne
Kooxda caafimaadka oo dhiig ka cabbireysa haweeney ku nool xerada Kaxarre/Cabdirisaaq Axmed Xuseen/Ergo
(ERGO) – Shariifo Haaruun Mahdi oo ah 70 sano jir waxay ka mahadcelisay daaweyn lacag-la’aan ah oo iyada iyo saddex carruur oo ay ayeeyo u tahay ay ka heleen koox dhaqaatiir ah. Waxaa laga daaweeyay duumo (malaariyo) ay muddo la qandhanayeen.
Ayeeyadan iyo carruurteeda waxay qeyb ka yihiin 113 qof oo ku nool xerada lagu barakacay ee Kaxarre oo ku taalla duleedka waqooyi ee magaalada Beledweyne, kuwaas oo ka faa’ideystay daaweynta oo lacag-la’aan ah. Kooxda gurmadka caafimaad fulisay oo mutadawaciin ah waxay isugu jirtaa dhaqaatiir iyo arday barata caafimaadka.
“Kaniiniyaal qandho-jabin ah ayaa la i siiyay. Sidoo kale ilmaha malaariyo ayaa iga haysay oo si fiican u dhul-dhigatay. Anigoo xanuunsan, ilmihii oo yaal yaallo, dhibaatada hayso aad yaabi, subixii dambe maalin cad ayaa naloo yimid. Aniga farxad [darteed] ayaan la ooyay, maxaa yeelay ma filaneynin,” ayay tiri Shariifo oo farxad ay ka muuqatay.
“Daryeel-la’aan ayaa na haysay. Wax aan wax ku soo gadanno ma aan laheyn, oo dhuuniga xaggiisa ayaan ka xumeyn.”
Shariifo ayaa korisa afar gabdho ah iyo wiil ay ayeeyo u tahay oo hooyadood ay dhimatay. Wiilkeeda oo ah carruurta aabbahood oo danyar ah ayaa gobolka Bakool ku xannaaneeya aabbihiis oo xanuunsan.
Haweeneydaan iyo carruurta ay hayso ayaa ku tiirsan shaqo dhardhaqis ah oo ay ka soo qabato xaafadaha Beledweyne, taasoo ugu badnaan maalinka ay shaqeyso ay ka hesho $5, lacagtaas oo sida ay tilmaantay aan ka badneyn biilka reerka.
Shariifo ayaa ka soo barakacday gobolka Bakool oo lix bil ka hor ay abaar uga leysay 80 neef oo ari ah. Waxay fileysay in caawimaad ay ka hesho xerada Kaxarre oo ay u soo barakacday.
Waxay noo sharraxday isbeddelka xaladdeeda caafimaad daaweynta kaddib.
“Xanuun aad u kulul ayaa na hayay kolkii hore waan isku dhex darsamay. Laakiin habeenkii dambe wax hurdo iga kiciya waa la waayay… caafimaad ayaa i soo galay. Ilaahey ayaa mahad iska leh, laakiin waxaan u mahadineynaa dhaqaatiirta noo imaatay ee gacanta na siisay.”
Cali Cabdi Muxumed oo isaguna deggen xerada Kaxarre ayaa sheegay in dhaqaatiirtu ay u daaweeyeen labo ka tirsan carruurtiisa iyo adeerkiis oo aragga naafo ka ah oo la xanuunsanaa tiifoow iyo maleeriya. Mid ka mid ah labada carruurta ah ayaa lug dhaawac ka ahaa oo tolliin loogu sameeyay, halka midka kale oo nafaqo-darro ay haysay ay dhaqatiirtu siiyeen malmalaaddo nafaqo leh.
Xerada ay deggan yihiin oo afar kilomitir ka durugsan magaalada ayaan laheyn xarun caafimaad, taas oo caqabad ku noqota dadka ay soo wajahaan xaaladaha caafimaad ee degdegga ah.
Cali ayaa sheegay in xerada aysan habeenkii ka shaqeyn wax gaadiid ah, taasina ay sababtay in bukaanno ay la soo darseen xaalado caafimaad oo degdeg ah loo waayo gaadiid lagu geeyo xarumaha caafimaad ee magaalada dhexdeeda ah.
Wuxuu tilmaamay in labo isbuuc ka hor uu ku qaaday gaari-dameer uu leeyahay labo bukaan oo xaalad degdeg ah ay la soo daristay.
“…Wiil yar oo laamayeere lugta ka gooyey habeen saddex saac ayaan gaari-dameer ku qaadnay oo aan ku geynay isbitaal weyn oo ku yaalla xaafadda Nuur-xawaad,” ayuu yiri.
“Hooyo foolatay habeen labo saac ayaan meeshan ka qaadnay gaari-dameer ayaan ku qaadnay oo isbitaalka weyn geynay.”
Cali ayaa toddobo bil deggan xerada Kaxarre kaddib markii ay colaad ka soo barakicisay gobolka Shabeelle ee Dowlad-deegaanka Soomaalida, halkaas oo uu ku lahaa beer 11 hektar ah oo wax-soo-saarkeeda ay qoys ahaan ku tiirsanaayeen. Wuxuu hadda qoyska ku biilaa shaqo xoogsi ah oo uu magaalada ka qabto.
Dr. Beddel Cali Xaanshi oo ah hormuudka kooxda fulisay daaweyntaan bilaashka ah ayaa sheegay in xeradan ay ka mid tahay shan xero oo ku yaalla Beledweyne oo ay ku nool yihiiin ku dhowaad kun qoys, kuwaas oo ay qorsheeyeen in mid walba ay isbuuc ka fuliyaan adeeg caafimaad oo la mid ah kan ay ka qabteen Kaxarre. Shanta xero ayaan xarumo caafimaad lahayn.
Dhaqtarka iyo kooxdiisa ayaa tababar toddobaad socday siiyay 15 qof oo saddex ay dumar yihiin.
Dhaqaalaha ku baxaya fulinta howshan waxaa iska soo uruuriyay kooxda shaqada wadda oo ka kooban 20 qof oo isugu jira dhaqaatiir iyo arday barata caafimaadka oo ka socda machadka horumarinta caafimaadka Ileys ee magaalada Baledweyne.
Ganacsi teknoolajiyadeed oo fursado shaqo u abuuray dhallinyarada jaamacadaha ka baxay
Qoysas ka barakacay colaad ka jirta Galgaduud oo hoy ka dhigtay geedo hoostood